မြန်မာသတင်း | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Tag Archives: မြန်မာသတင်း
(၁) ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက် ဧရိယာနည်းပြီး အထွက်လျော့၍ လုပ်ကိုင်လိုသူ နည်းလာ
Credit to:7Day
(၂) တင်ဒါအောင်ကျောက်စိမ်းများကြောင့် မန္တလေး ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် အနည်းငယ် ကျဆင်းဖွယ်ရှိ
ဖားကန့်မြို့ မဏိရတနာ ကျောက်စိမ်းခန်းမတွင် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ သည့် ရွေးကျန်ကျောက်စိမ်းတင်ဒါအောင် ကျောက်များ မန္တလေးမြို့ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် အနည်းငယ် ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ရှိ ကျောက်စိမ်းဈေးမှ ကျောက်စ်ိမ်းကုန်သည်များမှ ပြောကြားသည်။
(၁) Silk Air နှင့် Singapore လေကြောင်းလိုင်းများ အောက်တိုဘာမှ စ၍ ရန်ကုန်-စင်ကာပူ ခရီးစဉ်အား တစ်ပတ်လျှင် အကြိမ် ၂၀ သို့ တိုးမြှင့်ပျံသန်းမည်
ရန်ကုန်-စင်ကာပူခရီးစဉ် ပျံသန်းနေသော လေကြောင်းလိုင်းများဖြစ်သည့် Singpore Airlines နှင့်ှsilk Air လေကြောင်းလိုင်းများသည် လာမည့် အောက်တိုဘာလမှ စ၍ တစ်ပတ်လျှင် အကြိမ် ၂၀ သို့ တိုးမြှင့်ပျံသန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း Silk Air လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန်မြို့သို့ ပျံသန်းခြင်း ၂၅နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအ
Credit to: Eleven
(၁) မြန်မာအပါအဝင် မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံများ ဂျပန်နှင့် ပူးပေါင်း၍ စက်မှုလုပ်ငန်းထူထောင် ရေး စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ
မြန်မာအပါ အဝင် မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံများ ဂျပန် နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်း၍ စက်မှုလုပ်ငန်း ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက် သွားရန် ဩဂုတ် ၂၄ ရက်က သဘော တူညီခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Credit to: Democracy
(၂) ထားဝယ်၌ LNG သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရန် Shell ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းမည်
ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ၌ တည်ဆောက်မည့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့အရည် LNG သိုလှောင် ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ တတိယအပတ်အတွင်းက Italian-Thai Development ကုမ္ပဏီနှင့် LNG Plus International ကုမ္ပဏီတို့ ဘန်ကောက်၌ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၂၄ ရက် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းအရသိရသည်။
(၁) ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်းအတွက် JICA ထံမှ ဂျပန်ယန်း ၂၄ ဘီလျံကျော် ချေးယူခွင့်ပြုရန် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်းအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) ထံမှ ဂျပန်ယန်း ၂၄ ဒသမ ၈၆၆ ဘီလျံ ချေးယူခွင့်ပြုရန် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့သည်။
(၂) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုများကို အရေးယူမည်ဟုဆို
ပြည်တွင်း၌ အမေရိကန် ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်မှုကို လျှော့ချရန် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀န် ဆောင်မှုများအား နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရောင်းချမှုကို အရေးယူရန်စီစဉ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်မှ သတင်းရရှိသည်။
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ လယ်ယာသတင်း
(၁) ဒဂုံစီးတီးမြေနေရာ အစားပေးမှု အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးဆဲဟုဆို
ရပ်ဆိုင်းခံထားရသည့် ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်းကို မြေနေရာအ စားပြန်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လတ်တလောတွင် အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးနေဆဲအဆင့်သာရှိသေးသည်ဟု အဆိုပါကုမ္ပဏီမှသတင်း ရရှိသည်။
(၂) ဗိုလ်ဗထူး တိုက်ခန်းဝယ်သူများ ငွေသွင်းချိန် နောက်ကျပါက ဒဏ်ရိုက်မည်
တန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာစီမံကိန်းများတစ်ခုဖြစ်သော ဗိုလ်ဗထူး အိမ်ရာစီမံကိန်းတိုက်ခန်း ၀ယ်ယူထားသူများအနက် ငွေသွင်း၇န် ကျန်ရှိသူများအနေနှင့် သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပါက ရက်လွန် ဒဏ်ကြေး အဖြစ် ဒဏ်ရိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာ ဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
(၃) ဥယျာဉ်မြေကို အိမ်ရာမြေပြောင်းခြင်းက ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိဟုဆို
ထားဝယ်မြို့ပေါ် ၁၅ရပ်ကွက်ရှိ ဥယျာဉ် ခြံမြေ အဖြစ်ရှိနေသေးသည့် မြေများကို အိမ်ရာမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းသည် ပိုင်ဆိုင်သူအမည် အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်၍ မရသည့်အတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း ထားဝယ်မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲ ရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
(၄) ဖဆပလ အိမ်ရာနှင့် လမ်းသစ်ရိပ်သာ အိမ်ရာတို့ကို အဆင့်မြှင့်တင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်ပေးခဲ့သော ပြည်သူ့အိမ်ရာများထဲ ဖဆပလ အိမ်ရာနှင့် လမ်းသစ်ရိပ်သာအိမ်ရာတို့ကို အဆင့်မြှင့်တင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီး
ဌာတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးယုခိုင်ကေ ပြာသည်။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အ၀ ရရှိပြီဟု ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းက မယူဆဘဲ ငါးရာခိုင်နှုန်းကသာ ယူဆကြောင်း 2015 Myanmar Asian Barometer Survey (ABS) စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြ
(၂) ဦးသိန်းစိန်ကို သမ္မတ ထပ်ဖြစ်ရန် လိုလားသူ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိဟု စစ်တမ်းဆို
Credit to: The Voice
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစိစစ်မှု ကန့်ကွက်သူမရှိ အောင်မြင်
၂၀၁၅ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစိစစ်လွှာ ကန့်ကွက်သူမရှိအောင်မြင်ကြောင်း ရန်ကုန် တောင်ပိုင်းခရိုင် ရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ သတင်းရရှိသည်။
(၂) NLD က ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရုပ်သိမ်းမှုများ၊ မှားယွင်းတင်သွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးများထံ ပြန်လည်တင်ပြမှုများ ပြုလုပ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရုပ်သိမ်းမှုများ၊ မှားယွင်းတင်သွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးများထံသို့ ထိုသူများက ပြန်လည်တင်ပြမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း NLD ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
(၃) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်မှ ပယ်ချခံရမှု အယူခံဝင်မည်ဟု ဦးရွှေမောင်ဆို
မွေးဖွားချိန်တွင် မိဘနှစ်ပါး နိုင်ငံသား မဟုတ်သောကြောင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လျှောက်ထားလွှာ ပယ်ချမှုကို ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ အယူခံဝင် ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်ဟောင်း ဦးရွှေမောင်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
(၄) နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက် ကွဲပြားခြင်း မရှိကြောင်း NLD နှင့် ၈၈ ပူးတွဲကြေညာ
လာမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ နှင့် ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအကြား နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက် ကွဲပြားခြင်း မရှိကြောင်း နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
(၅) အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည်ဆိုသော ပါတီကြီးနှစ်ခုက ပြည်သူသို့ ကတိက၀တ် မထုတ်ပြန်နိုင်သေးချိန်တွင် ပါတီတစ်ခုက ကတိက၀တ် ရေးဆွဲထားပြီ
အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့နိုင်သည်ဟု ကြေညာထားသော အင်အားကြီး ပါတီကြီး နှစ်ခုက ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်ပါက ပြည်သူများသို့ လုပ်ဆောင်ပေးမည့် ကတိက၀တ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခြင်းမရှိ သေးသည့် အချိန်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တတိယအများဆုံးတင်ထားသော တစည (တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ)က ပြည်သူသို့ ကတိက၀တ် ကို ထုတ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
See More>>> Attached file
(၆) သူရဦးရွှေမန်း ပါတီမှ နုတ်ထွက်ပါက ထူးခြားသော ပြောင်းလဲမှု မရှိနိုင်ဟု ဦးဌေးဦး ပြောကြား
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပါတီမှ နုတ်ထွက်ပါကလည်း ပါတီတွင်း ထူးခြားသော ပြောင်းလဲမှု မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လက်ရှိ ယာယီဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားသော ဦးဌေးဦးက The Voice သို့ ပြောသည်။“ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲမှုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ နေရာတစ်နေရာတော့ လွတ်သွားတာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
Credit to: ပြည်မြန်မာ
(၁) တပ်မတော်အနေဖြင့် လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန်ကို သာလိုလားပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလည်း လက်ခံသွားမည်ဟု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြောကြား တပ်မတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အချိန်သင့်သည့်အခါတွင် အများပိုင်လုပ်ငန်းများအသွင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုဆို
တပ်မတော် အနေဖြင့် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ သည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန်ကိုသာ လိုလားပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လည်း လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် တပ်မတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များကိုလည်း အချိန်သင့်သည့်အခါတွင် အများပိုင်လုပ်ငန်းများအသွင် ဆောင် ရွက်သွားမည်ဟု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားသည်။
(၂) တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပါဝင်ရေးမူအားဖြင့် ကိုင်စွဲ၍ အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးမည်
(၃) အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းမှသာ ဖြစ်မည်
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး ပါဝင်သော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးမှာ လာမည့်လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းမှသာ ဖြစ်မြောက်လာနိုင်မည်ဟု KNU ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က ပြောသည်။
(၄) မူဆယ်မြို့ အင်းဝဘဏ် အဆောက်အအုံအပြင်ဘက်တွင် သြဂုတ် ၂၄ ရက် ည ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့
မူဆယ်မြို့ အင်းဝဘဏ် အဆောက်အအုံအပြင်ဘက်တွင် သြဂုတ် ၂၄ ရက် ည ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ ပြီး ပေါက်ကွဲမှုအရှိန်ကြောင့် ကိုက် ၅၀၀ အကွာခန့်ရှိနေအိမ်၊ အဆောက်အအုံများတွင်ပါ တုန်ခါမှုကို ခံစားရကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။
(၁) တရုတ်စီးပွားရေး နှေးကွေးမှုကို စိုးရိမ်နေကြချိန်တွင် အာရှ၌ စတော့ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်း၊ ရေနံဈေးနှုန်း ဆက်လက်ကျဆင်းပြီး ဒေါ်လာ ၄၀ အောက်သို့ ရောက်ရှိ
တရုတ်စီးပွားရေး နှေးကွေးမှုက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ရိုက်ခတ်လာနိုင်ကြောင်း စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်နေချိန်တွင် ရှန်ဟိုင်းစတော့ဈေးကွက်၌ ရှစ်နှစ်အတွင်း အဆိုးဆုံး ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အာရှစတော့ဈေးကွက်သည် သြဂုတ် ၂၄ ရက်က သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့သည်။
(၁) “ဦးပိုင်သည် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၊ တပ်မတော်သားများ၊ ပြည်သူများအတွက်ဟု ကာချုပ် ပြော”
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်အနေဖြင့် တပ်မတော်သား မိသားစုဝင်များ၏ သက်သာချောင် ချိရေး၊ စစ်မှု ထမ်းဟောင်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ပြည်သူလူထု၏ သက်သာချောင် ချိရေးများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ရန်နှင့် နိုင်ငံတော် စီးပွားရေးအား အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မနေ့က စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောဆိုလိုက်ခြင်း သည်။
Credit to: Irrawaddy
(၁) ဟားခါးမြို့ပေါ်ရှိ မြို့ဟောင်းရပ်ကွက် လုံးဝမနေသင့်တော့သဖြင့် အိမ်ထောင်စု ၅၂၀ ပြောင်းရွှေ့ရန် နေရာအသစ်တောင်းခံထားမှုကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ သဘောတူညီ
ဟားခါးမြို့ ပေါ်ရှိ မြို့ဟောင်းရပ်ကွက် လုံးဝ မနေသင့်တော့ခြင်းကြောင့် အိမ် ထောင်စု ၅၂ဝပြောင်းရွှေ့ရန်နေရာ သစ်တောင်းခံထားကြောင်း ချင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန်ကြီးဦးကျော်ငြိမ်းက ပြော သည်။
This entry was posted in ကမ္ဘာ့သတင်း, ကျန်းမာရေး, ဘာသာရေး, မြန်မာသတင်း, News and tagged စီးပွားရေးသတင်း, တိုတိုထွာထွာသတင်း, တိုတိုထွာထွာသတင်းများ, ဖားကန့်, ဘဏ်, လူမှုရေး, သတင်းစုံ, ကျောက်စိမ်း, မြန်မာစီးပွားရေးသတင်းများ, မြန်မာဘဏ်လုပ်ငန်း, မြန်မာသတင်း, မြန်မာသတင်းဘလော့, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်း, Burma, Burma Blog, Burma Blogger Shwe Htoo, Update News on August 26, 2015 by koshwehtoo.
ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း နောက်ကွယ်က
This entry was posted in Artical, စီးပွားရေး, မြန်မာသတင်း and tagged ခင်အောင်မြင့်, စီမံကိန်း နောက်ကွယ်, ဗိုလ်ချုပ်ခင်အောင်မြင့်, ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း, လက်ပံတောင်းကြေးနီ, အုန်းကျော်မြင့်, ဦးမြင့်ဆွေ, ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး, ရှောင်စန်း, ရှောင်စမ်း ပြည်သူ့ဥယျာဉ်, ရွှေထူး, မြန်မာသတင်း, Blogger Shwe Htoo, Burma, Burma Blogger Shwe Htoo, Crown Advance, General Khin Aung Myint, Myanmar, Nature World, People's Park, Shaung San, Yangon Crown on September 2, 2014 by koshwehtoo.
ုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်တော့မှ ပြည်သူကို ကူမလဲ
Thai-Myanmar နယ်စပ်ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ်မျဉ်းပေါ်မှာကျနော်ရပ်နေပါတယ် နောက်ကိုခြေတလှမ်းဆုတ်ရင် မြန်မာမြေပဲ့ ကျနော့်နောက်မှာမြင်နေရတာက မြန်မာပိုင်နက် ဘုရားသုံးဆူမြို့ပါ ထိုင်းဖက်ခြမ်းနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် အလံတိုင်တခုပဲမြင့်ပြီး ကျန်တာအကုန်နိမ့်ပါတယ်။
ကျနော့်ညာဖက်ခြမ်းမှာက ထိုင်းလဝကဂိတ်ရုံးလေးတည်ရှိပြီး ထိုင်းတွေ Border Pass လုပ်ပြီးမြန်မာပြည်ဖက်ကိုဝင်နေကြတာတွေ့ပါတယ်။ အာ့နဲ့ပြောရအုံးမယ် အဲလိုထိုင်းတွေဝင်နေတော့ ကိုယ်လည်းသူတို့နောက်က တန်းစီပြီးဝင်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လို့ ဘဒ်ပချာချွန်(ထိုင်းမှတ်ပုံတင်)ဆိုပြီးတောင်းတော့ မြန်မာပတ်စပို့ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ထိုင်းလဝကကမျက်ကလူးဆန်ပြာဖြစ်သွားပြီး…ဟာ!! ဖမာ့ပဲ့..သွားလို့မရဘူး..ခွန်ထိုင်းပဲ့သွားလို့ရတယ် မင်းလာရာလမ်းကအခုပြန်လှည့် ပိုင်း…ပိုင်း..ဆိုပြီးနှင်လွှတ်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း တော်တော်ကြောင်သွားပါတယ် ဗမာပြည်ထဲကို ဗမာဝင်လို့မရဘူး ခွန်ထိုင်းပဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့။
အာ့နဲ့အပြင်ထွက်လာပြီးရပ်နေတုန်း ဗမာတယောက်ရောက်လာပြီး အကိုသုံးဆူဖက်ဝင်မလို့လား ကျနော်ဌာနကလူနဲ့ ညှိပေးမယ်လေ ဘတ် ၂၀၀ ပေးရမယ်ဆိုပြီးလာပြောပါတယ်။ အဲလိုပြောခိုက်မှာပဲ့ ခုနက ထိုင်းလဝကက ကျနော့်ကိုလက်ရပ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်းထင်မိတာ ဒီထိုင်းခုမှစိတ်ကောင်းဝင်လို့သွားခိုင်းတာထင်ပြီး သူ့ဆီလျှောက်လာပါတယ်။ အဲမှာ သူပြောပြတယ် မင်းပတ်စပို့နဲ့က ဒီဂိတ်တွေကဝင်လို့မရဘူး ပုံမှန်ဂိတ် (ရနောင်း၊မဲဆောက်တို့လို) တွေကပဲ့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့။ ခုနကမြန်မာရဲနဲ့လုပ်စားနေတဲ့ကောင်တွေက
မင်းဆီကလိုင်းရိုက်ခ လည်းယူမယ်။ ပြီးတော့နောက်ရဲကို လက်ကုတ်ပြီး မင်းကိုပတ်စပို့နဲ့ဝင်လာတာကိုအကြောင်းပြုပြီး ထပ်နွှာမယ်။ မင်းတို့ဖမာ့အာဏာပိုင်တွေအကျင့်မင်းလည်းသိမှာပါ။
ပြန်လှည့်ပြီး တရားဝင်ဂိတ်တွေကပဲဝင်ပါ တခြားအပေါက်တွေရှိတယ် မင်းဝင်သွားလည်း ဘုရားသုံးဆူက သေးသေးလေး။ သူတို့ ချက်ချင်းရှာတွေ့တယ် လာရစ်ကြမှာ လို့ပြောပြပါတယ်။ အာ့နဲ့ကျနော်လည်း မဝင်ဖြစ်တော့ပဲ အနီးနားက ဗမာမတယောက်ရောင်းနေတဲ့ထမင်းဆိုင်မှာဝင်းစားပြီး ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီအမကြီးလည်းပြောတယ်။ ပတ်စပို့ရှိမှန်း မြန်မာဖက်ကအာဏာပိုင်တွေသိသွားရင် မဝင်တာပဲ့ကောင်းတယ်တဲ့ အဲသလိုနဲ့ခံရတဲ့လူပေါင်းများပြီလို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်လည်း စံခဘူရီမြို့ထဲလိုင်းကားစီးပြီးပြန်ဝင်လာပါတော့တယ်။
လမ်းမှာစဉ်းစားမိတယ်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာ ဘယ်လိုအခြေနေပဲ့ဖြစ်နေပစေ သူတို့ထိုင်းတွေ အချင်းချင်းကူညီတာပဲရှိတယ်။ ပျော့ကွက်ရှာပြီးမရစ်ကြမလုပ်စားကြဘူး။ မြန်မာအာဏာပိုင်ဆိုသူတွေ နိုင်ငံဝန်ထမ်း ဆိုသူတွေကတော့ အမြဲလိုလို အရပ်သားပြည်သူဆို အားနည်းချက်ရှာ ရစ်မယ် ညှစ်မယ် ရှာစားဖို့ပဲ အာရုံစိုက်နေကြတယ်။
ရှက်ဖို့ကောင်းတာက ဒီလုပ်ရပ်ကို ထိုင်းတွေတောင်သိနေပြီ….ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါကျမှပဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်း အာဏာပိုင်တွေ ပြည်သူကိုကူညီတဲ့ခေတ်ရောက်ပါ့မလဲ..???
This entry was posted in Artical, မြန်မာသတင်း and tagged 2014, Article, ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်, ရဲတွေရဲ့ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်, ရွှေတြိဂံ, ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း, မြန်မာသတင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း, Blogger Shwe Htoo, Border Trade, Burma, Ko Shwe Htoo, Myanmar, Myanmar Passport Holder, Myanmar People, Passport, ShweHtoo's blog, Thai, Thai Myanmar Border on September 2, 2014 by koshwehtoo.
မြန်မာ စစ်အစိုးရလက်ထက်က ခရိုနီလို့ သတ်မှတ်ခံထားသူတွေထဲက တချို့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခံထားရာကနေ ပယ်ဖျက်ပေးဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လကုန်ပိုင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက အရာရှိတချို့နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တချို့နဲ့ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန် အရာရှိတွေကလည်း ခရိုနီလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာသူဋ္ဌေးတွေ ဒီမိုကရေစီရေးကို ရှေးရှုရင် နာမည်ပျက်စာရင်းက ပယ်ဖျယ်ဖွယ် ရှိတယ်ဆိုတာ ပြောလာကြတယ်။
စာရင်းက လွတ်ဖို့ စစ်တပ်နဲ့ ရှင်းရှင်းနေဖို့နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ မလုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေက ဆိုတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမား ရေးရာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီး တွမ်မာလင်နော့စကီးက ဧရာဝတီကို မကြာသေးခင်က ” စစ်တပ်နဲ့ စီးပွားရေး အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပြီလား၊ မြေယာ သိမ်းယူမှုကို ရှောင်ရှားခြင်း အပါအ၀င် လူ့အခွင့် အရေးကို လေးစားသလား၊ အရပ်ဖက်ဥပဒေတွေကို လိုက် နာသလားဆိုတာ ကျနော်တို့ ကြည့်သွားပါမယ်။ ဒီအရာတွေကို ပြသနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတခုကတော့ စီးပွားရေး ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စာရင်းစစ် စနစ်ကို အသုံးပြုဖို့ နဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ လူမှုရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်မှုတွေရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ကုသိုလ်ဖြစ် လှူဒါန်းမှုတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ ရှင်းလင်းအောင်ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လို သုံး သလဲဆိုတာက အရေး မကြီးပါဘူး။ သူတို့ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရှာသလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာအပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံက အရပ်သားနိုင်ငံရေးသမားများအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူလွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရဦးရွှေမန်းတို့ကို ဒဏ်ခတ်မှုစာရင်းက ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကို မပယ်ဖျက်သေးတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက စီးပွားရေးလက်တွဲဖက်တွေလို့ မြင်ကြတဲ့ အမေရိကန် စီးပွားရေးသမားတွေက ဆူဆူညံညံ တောင်းဆိုလာနေကြတာကတကြောင်း၊ တရုတ်ဩဇာအောက်က ရုန်းထွက်လာနေတဲ့ မြန်မာကို လက်မလွှတ်ချင်ဘဲ ဆုပေးချင်တာက တကြောင်းကြောင့် ဒဏ်ခတ်မှုစာရင်းကို ပြင်ဖို့ လုပ်လာကြပါတယ်။။
ဇန်န၀ါရီလ လလယ်ပိုင်းတုန်းကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး Derek Mitchell က မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဒဏ်ခတ်မှု စာရင်းအတွင်းက နာမည်အချို့ကို မကြာမီ ဖယ်ရှားပေးတော့မယ်လို့ သတင်းကောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Charles H. Rivkin လည်း ရှေ့လ ရန်ကုန်ကိုလာပြီး မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒဏ်ခတ်မှုစာရင်းကို ပြန်ပြင်ရာမှာ သူ့ခရီးစဉ်က အရေးပါပါလိမ့်မယ်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာအပေါ် တားဆီး ပိတ်ပင်အရေးယူထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို တော်တော်များများကို ဖြေလျှော့လာတာပါ။ ကိုကာကိုလာ ကုမ္ပဏီနဲ့ Western Union တို့လို ကုမ္ပဏီတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုဆိုရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြင် နောက်ထပ် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်နေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တွဲလုပ်မယ့် ငွေပင်ငွေရင်း အလုံးအရင်း ရှိသူတွေ တော်တော်များများက SDN လို့ ခေါ်တဲ့ ဒဏ်ခတ်မှု စာရင်း အမည်ပျက် စာရင်းဝင်ဖြစ်နေတာကြောင့် အမေရိကန်ဘက်က ကုမ္ပဏီတွေက မြန်မာခရိုနီတွေရဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ စီးပွားရေး အတူလုပ်ရင် ဥပဒေအရ မလွယ်တဲ့ အခြေအနေ ဆိုက်နေတာပါ။
လတ်တလောမှာပဲ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းထားတဲ့ မြန်မာကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၂ဝ လောက်နဲ့ တသီးပုဂ္ဂလတွေ တော်တော်များများ ရှိနေတာပါ။
မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကို အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းတာကလည်း ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မတိုင်ခင်ထိ မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ နီးစပ်ဆက်နွယ်ပြီး အခွင့်ထူးတွေ ခံစားခဲ့ကြလို့ဖြစ်တယ်။
ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ ချီတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး သဘောအရ စီးပွားရေးကို စစ်တပ်ကပဲ အများဆုံး ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီတွေကလည်း မြန်မာ အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆက်နွယ် ထိစပ်ကြရတာဖြစ်ပြီး အခုထိလည်း ဒီအရှိန်က ရှိနေဆဲပဲလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်။
“ တိုင်းပြည်မှာ အဓိက စီးပွားရေးကို လုပ်ဆောင်ကြသူ အများစုဟာ အခုထိလည်း သီးခြား ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်ခံထားရဆဲပါဘဲ” လို့ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ဆိုင်ရာ အထူးပြု ရှေ့နေ Erich Ferrari က Wall Street Journal သတင်းစာကို ပြောထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံသွားစဉ် နာမည်ပျက်စာရင်းထဲ ရှိနေတဲ့ မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် မက်စ် ဦးဇော်ဇော် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဟိုတယ်တခုမှာ တည်းခိုခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကြိုတင်အချက်ပြမှုလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်လူ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဟိုတယ်မှာ တည်းခိုလို့ အမေရိကန်ရဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်ကို ချိုးဖောက်ရာမကျဘူးလို့ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဦးဇော်ဇော်ပိုင် ဟိုတယ်မှာ တည်းခိုတာဟာ အကျိုးတုန့်ပြန်ချက် နည်းမယ်ဆိုတာ အမေရိကန်တွေ တွက်ချက်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပုံပါ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ကုန်မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟေလာရီကလင်တန် နေပြည်တော် လာတုန်းကလည်း ဦးဇော်ဇော်လို နာမည်သိပ်မဆိုးတဲ့ ဦးချစ်ခိုင်ပိုင်တဲ့ သင်္ဂဟဟိုတယ်မှာ ရွေးချယ်တည်းခိုသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
This entry was posted in Artical, မြန်မာသတင်း and tagged 2014, American, American Foreign Council, အမေရိကန် စီးပွားရေးပိတ်, ဦးချစ်ခိုင်, ဦးဇော်ဇော်, ဦးတေဇ, ဦးတေဇ အမေရိကန်, မြန်မာသတင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, Blogger Shwe Htoo, OFAC, SDN, Shwe Htoo, Specially Designated Nation, U Chit Khaing, U Tay Za, U Zaw Zaw on August 28, 2014 by koshwehtoo.
ဘဘ ဦးစံလင်း ( မြေပုံ ) ခင်ဗျား….
ဝမ်းသာပါတယ် ဘဘ အခုလို ခေါင်းလောင်းကြီးကို ရှာဖွေနိုင် ( ဘဘ အပြောအရ ) တဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာရပါ၏…
ဘဘ ဒီလိုပဲပြောမယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ပြီးသားပါ ဘဘ ပြောထားတဲ့ရက် ကလည်း ပြည့်နေပြီ ဆိုတော့ ဘဘ ဒီလိုပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့ ၊ ဘဘ တင် ဒါမျိုး ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဘဘ အရင် ခေါင်းလောင်းကြီးကို ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တိုင်း တွေ့ပြီလို့ပဲ ပြောခဲ့တာ , မတွေ့ဘူးလို့ဘယ်အဖွဲ့ကမှ မပြောခဲ့ဘူး, ခက်တာက တွေ့တယ်သာပြောကြတာ ကုန်းပေါ်ကိုတော့ အခုချိန်ထိ ရောက်မလာသေးဘူး..
တစ်ခုရှိတာက ဘဘ အရင် ရှာခဲ့တဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ ကတော့ ခေါင်းလောင်းကို တွေ့ပြီ သို့သော် နည်းပညာလိုအပ်ချက်၊ အစီုးရရဲ့ ထောက်ပံ့မှု မရခြင်း,တွေ့ထားတာက ထုထည်ကြီးတဲ့ ဂျင်ပုံကြီး မို့ ခေါင်းလောင်းဆိုတာ ၁၀၀% မသေချာလို့ ဆိုပြီး ရိုးသားစွာ ဝန်ခံပြီး လက်လျော့ လိုက်ကြတယ်။
အခု ဘဘ ကြတော့ အရူးမို့လား မသိဘူး ထူးတယ်ခင်ဗျ …
ဘဘ က ဒါကြီးကို ဆယ်မယ်ဆိုပြီး Media အကြို ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ကတည်းက အရူးကွက်နဲ့ စခဲ့တာလေ …ဘဘ မှတ်မိမှာပါ..
ဘဘ ပဲ မျက်ရည် လည်ရွဲ နဲ့ ပထမ အခေါက်က တွေ့ပေမယ့် နဂါးတွေ စောင့်လို့ ဘဘ ကို ရေအောက်ထဲမှာ ဂုပ်ကို ဆွဲထားလို့ ဆယ်လို့မရခဲ့ဘူး
(ဂုပ်ကိုသာ ဆွဲ မထားဘူးဆိုရင် တစ်ခါတည်းပဲ ပွေ့ ယူလာတော့မလို) ဆိုပြီး Media ရှေ့မှာ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက် ငိုချင်းချ ပြီး အရူးကွက်စနင်းခဲ့တာ သားက မှတ်မိတယ်ခင်ဗျ….
Media ပွဲလဲ ပြီးရော ဘဘ ရဲ့ ခေါင်းလောင်းရှာပုံတော် စပြီဆိုပါတော့ အဲ့မှာလည်း ဘဘ လည်တယ်ခဗျ , စည်းပေါက်မယ် , မလိုအပ်တဲ့ ပြသနာ တွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီး သတင်းမထုတ်ပြန်ဘူး ခင်ဗျ တစ်ကယ်တော့ ဘဘ မှာ ရေရေရာရာ ပြောစရာ သတင်းမှ မရှိတာ, ဘယ်သတင်းကိုထုတ်ပြန်မှာလဲ
ရှာပြီဟေ့ ဆိုတော့လည်း ရေအောက်ကြမ်းပြင် ပြတ်ရွေ့ခြင်းပထဝီ အနေအထား ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာတွေကို လုံးဝ ထည့်မတွက်ပဲ , လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၄၀၀ လောက်က ကျသွားတဲ့ နေရာမှာပဲ ရေ တစွတ်စွတ် ငုပ် , radiator , metal detector တွေ မသုံးပဲ ရှာဖွေတဲ့ ဘဘ ရဲ့ ထင်ရာစိုင်း နည်းစနစ် တွေကိုအံ့သြ မိတာအမှန်ပဲ ခင်ဗျ။ အဲ့လိုနဲ့ ၁ ပတ်လောက်ကြာတော့ ဘဘ ထင်သလိုဖြစ်မလာတော့ အကျပ်ရိုက်ပြီ ,အဲ့ဒီမှာ ဘဘ ကို ကယ်လိုက်တာ နတ်စင်တစ်ရာ ဘုန်းကြီးခင်ဗျ။
ဘဘုန်းကလည်း နဂါးတွေ သိုက်တွေ လူဝင်စားတွေဆိုရင် ဘဘုန်းဂွင် တွေ ဆိုတော့ အခုရှာတဲ့နေရာကနေ ပေ ၂၀ လောက် ရွှေ့ရှာပါဆိုပြီး မိန့်တယ်ခင်ဗျ ….ဘဘ က လည်း နဂို ကတည်းက ဂယောင်ဆိုတော့ ဘဘုန်း ပြောတဲ့နေရာကို ရွှေ့ တယ်ခင်ဗျ ( မရွှေ့ရင်လည်း ဘဘ ဘာလုပ်ရမှန်းမှ မသိတော့တာ ) သောင်တူးစက်တောင် ပြောတဲ့နေရာ မရောက်သေးဘူး ဆရာတော်က ခေါင်းလောင်းတွေ့ပြီ ဆိုပြီး media တွေကို မိန့်လိုက်တယ် အဲ့လို ဘဘ တောင်မသိလိုက်ပဲ ဆရာတော်က ဖောလိုက်တော့ ဘဘ ရဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ဘဘုန်းအရှက်မကွဲအောင် ခေါင်းလောင်းတော့တွေ့တယ် ဒါပေမယ့် ဓမ္မစေတီ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ထပ်ဖောရသေးတယ် , အဲ့ဒီ မှာ
ခေါင်းလောင်းက ၂ လုံးလား ဆိုပြီး media ကိုကိုမမ တို့ ယောင်စိန် တွေ ဖြစ်ကုန်ရော..
( ဘဘ တို့ အဖွဲ့က ရီရတာတော့ အမှန်ပဲ )
ဒါနဲ့ပဲ သောင်တူးစက်က ဘဘုန်း ထင်သလို ပြောလိုက်တဲ့နေရာ လည်းရောက်ရော ပွဲမစခင်ကတည်းက ဘဘ တတွတ်တွတ် ပြောနေတဲ့ ဘဘ သံယောဇဉ်ကြီးလှတဲ့ ဘဘ ရဲ့ အဓိက ဇတ်ကောင် နဂါးတွေ အပေါ်ကို ပိပါလေရောတဲ့။ အဲဒါကို အဲ့ ပိနေတဲ့ နဂါးထဲက တစ်ကောင်က လှည်းကူးမှာ နေတဲ့ အမယ်အိုကြီးကို ဝင်ပူးပြီး ဖယ်ပေးဖို့ ဖယ်မပေးရင် ခေါင်းလောင်းကို ဆယ်မရအောင် လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီး media ကနေတစ်ဆင့်ဖွလိုက်တယ် , ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ဘဘ နပ်သွားပြီ အရူးလိုလို ဘွားတော်လိုလို အဘွားကြီး ပြောတဲ့အတိုင်း မယောင် တော့ပဲ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်တယ်။ ဘဘ ရဲ့ hero နဂါးတွေ ဒုက္ခ ရောက်နေတာကို ဘဘ လက်ပိုက်ကြည့်နေကတည်းက နဂါး စောင့်တယ်လို့ ဘဘ ပြောခဲ့တာ ဖောကွက်( အရူးကွက် ) ဆိုတာ သိတဲ့လူကသိတယ် ဘဘရေ။
အခုတော့ ဘဘ ရဲ့ ပွဲသိမ်းရိုက်ချက် လာပြီ။ ခေါင်းလောင်းကိုတော့ တွေ့ပြီ ဒါပေမယ့် နဂါးထဲမှာ အကြီးဆုံး ရွှေရောင် နဂါးမင်းကြီးက ဆီမီးထွန်းပြီး ပူဇော် နေလို့ ဆယ်ဖို့ရက်ကို ခဏစောင့်ရအုံးမယ်လို့ ဘဘ ပြောပြီနော်။ ပွဲစပြီ ဆိုကတည်းက ဘာ တစ်လုံးမှ မပြောပဲ အ အ ကြီးလို နေလာတဲ့ ဘဘ က အခုတော့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီပေါ့။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ရှာတဲ့ အဖွဲ့တိုင်း တွေ့ပြီလို့ပြောပါတယ် ကုန်းပေါ်ကိုသာ မတင်နိုင်ကြတာ ပြည်သူလူထုကို မပြနိုင်ကြတာ အခု ဘဘ ကလည်း တွေ့တယ်လို့ပြောပြန်ပြီ။
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ဖူးအောင် , ဘဘ ကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ လူတွေ ပါးစပ်ပိတ်သွားအောင်. ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ဆိုတာ တစ်ကယ်ရှိပါလား ဆိုတာ ရှင်းသွားအောင် ဘဘ လုပ်နိုင်ပါ့မလား လို့ သံသယဝင်မိတယ် , ဘဘ ကလည်း အရူးလိုလို အထူးလိုလို ဂယောင်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မျက်စိရှေ့မှာ ခေါင်းလောင်းကြီးကို မြင်ရတော့မှပဲ ယုံတော့မယ် ဘဘရေ…။
နဂါးတွေ အကြောင်းကတော့ သူများတွေတော့မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ဘဘပြောနေတဲ့ နဂါး Story တွေဟာ ဘဘ ရဲ့ exit လို့ထင်မိတယ် …..ကမ္ဘာကျာ် လူလိမ်ကြီးတွေရဲ့ ဆိုရိုးစကားကလည်း ရှိတယ်လေ အဲဒါက “လိမ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရှူးကိုယ်ပတ် အဖြစ်ကနေ လွတ်မြောက်အောင် ထွက်ပေါက် ဖန်တီးထားပါ ” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ အခု ဘဘလည်း ခေါင်းလောင်းကို ဆယ်မရဘူး ဆိုတဲ့အခါ အကြောင်းပြချက် ရအောင် နဂါး story တွေကို ပွဲမစခင်ကတည်းက ပြောလာတယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း။
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ တစ်ကယ်ကို ခေါင်းလောင်းကြီး ကို ဆယ်နိုင်ပြီ ဆိုရင် ခေါင်းလောင်းတီးဖို့ ငပိရိုး နဲ့အတူ ရင်ခုန်စွာ စောင့်နေပါ့မယ် ဘဘ ရေ (ခေါင်းလောင်းက ငပိရိုး နဲ့ထိုးမှ အသံထွက်မယ်ဆိုလို့ )
ဘဘ လို ဂယောင်ကို ခင်တဲ့
ဖိုးသား ( ငပိရိုးနဲ့စောင့်နေသူ)
This entry was posted in Artical, ပစ်စာ, မြန်မာသတင်း and tagged ဓမ္မစေတီ, ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း, ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာတွေ့, ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းအကြောင်း, ဦးစံလင်း (မြေပုံ), ခေါင်းလောင်းကြီးတွေ့ပြီ, မြန်မာသတင်း, Burma Blogger, Burma Blogger Shwe Htoo, Burma News, Damazedi Bell, Myanmar, Myanmar News, Yangon on August 27, 2014 by koshwehtoo.